Asterisk: ny safidy tsara indrindra amin'ity tetikasa loharano misokatra ity | Avy amin'ny Linux
Asterisk: ny safidy tsara indrindra amin'ity tetikasa loharano misokatra ity
Isaac | | fampiharana
Asterisk dia iray amin'ireo mpitarika rindrambaiko switchboard an-tariby mifototra amin'ny rafitra VoIP sy PBX. Saingy tsy ny rindrambaiko irery no misy hampihatra an'ity karazana mpizara ity. Ka raha tianao mahalala alternatives Mba hampiharana ireo rafitra ireo dia ireto misy ny sasany izay tena miavaka.
Ny sasany amin'ireto solony ireto dia loharano misokatra na maimaim-poana, ny hafa kosa tsy. Fa izy rehetra kosa dia tena mahaliana ary izy ireo dia azo ahitsy amin'ny filanao amin'ny fomba tsara kokoa na ratsy kokoa.
1 Lisitry ny safidy hafa amin'ny Asterisk
1.1 3CX (vahaolana feno sy solon'ny Asterisk)
1.2 Solony hafa amin'ny Asterisk
1.2.2 Cloudy Cloud
1.2.7 Zadarma switchboard
Lisitry ny safidy hafa amin'ny Asterisk
Eto ianao dia afaka mahita lisitra feno miaraka amin'ny sasany ny safidy tsara indrindra misy an'ny Asterisk. Raha, amin'ny antony sasany, ny Asterisk dia tsy manome fahafaham-po ny filanao na te hanandrana zavatra hafa ianao, azonao atao ny manandrana ny vintanao amin'ny iray amin'ireo tetikasa ireo ...
3CX (vahaolana feno sy solon'ny Asterisk)
Asterisk dia sehatra loharano malalaka sy malalaka. Fampaherezana lehibe io, fa tsy rafi-telefaona vonona hampiasaina, mila a fametrahana sy fikirakirana hanombohana mampiasa azy. Raha zavatra tsotra kokoa no tadiavinao dia manana ny rafitra asterisk mifototra aminao toy ny Digium, FreePBX, Switchvox izay mitaky ny fividianana modely fanitarana na add-ons mba hanana fiasa mandroso.
3CX Linux dia manana ny tombony rehetra amin'ny Asterisk, fa tsy misy fatiantoka ireo sehatra hafa voalaza ao amin'ny fehintsoratra teo aloha. Miaraka aminy ianao dia afaka manadino momba ny aretin'andoha mba hanana rafitra miasa hatramin'ny voalohany.
Entre ny manintona:
Fampiantranoana maimaimpoana 1 taona.
Azo atao ny mametraka ny Google Cloud, Amazon AWS na Microsoft Azure ao anaty rahona, na dia amin'ny tranga VPS Linux aza, ao amin'ny VM, Raspberry Pi, na OpenStack.
Tsotra amin'ny resaka fametrahana sy fikirakirana.
Fitantanana mora tsy misy fahalalana teknika.
Manavao azy ho azy.
Fanamafisana ny fiarovana ny hacking.
Manana fampiharana maimaim-poana ho an'ny iOS sy Android izy io, ary miasa amin'ny telefaona IP ihany koa.
Avelao ny vatan'ny SIP anao hitahiry amin'ny antso lavitra.
Fampidirana mora amin'ny CRM isan-karazany.
Tsy mila modely fanitarana ianao.
Tranonkala ofisialy 3CX
Solony hafa amin'ny Asterisk
Ankoatry ny teo aloha dia afaka mahita vahaolana hafa hafa amin'ny Asterisk ianao na miaraka amina asa mitovy amin'io.
Vahaolana ho an'ireo orinasa mitady hanatsarana ny traikefany amin'ny mpanjifany amin'ny alàlan'ny fantsom-peo manokana. CloudTalk dia vahaolana feno hamoronana ny PBX miorina amin'ny rahona. Izy io dia ampiasaina amin'ny mpiasa miasa maro, ary ho an'ny asa be ao amin'ny orinasao.
Miorina tsara vahaolana e-varotra na CRM marobe, izay manintona kokoa azy.
Tranonkala ofisialy CloudTalk
Cloudy Cloud safidy hafa amin'ny an'ny teo aloha io. Fomba iray hanana sehatra mitovy amin'ny Asterisk, fa mifototra amin'ny rahona sy miaraka amin'ny fahaizana manome hery ireo masoivohon'ny orinasanao ary manome azy ireo fomba fijery 360º amin'izay mitranga amin'ny mpanjifa.
Mamela a fampiharana haingana sy mora, mamela anao hanana ny rafitra ao anatin'ny minitra vitsy, ankoatry ny fampifanarahana ny lalàna momba ny angona ankehitriny. Ary raha toa tsy dia hitanao loatra ity dia manana ny fahafaha-manana betsaka indrindra nomena ny fihenam-bidy, mba tsy hijanona mora foana ny asany.
Tranonkala ofisialin'ny Genesys Cloud
Izy io dia serivisy misy birao miorina amin'ny rahona. Ity serivisy ity dia natao ho an'ny SME sy orinasa lehibe. Ho fanampin'izany, mampiditra rafitra finday 100% feno sy zanatany hitantanana ny antso, ny fifandraisana, sns ianao.
Izy io dia azo ovaina, miaraka amin'ny fahafaha-miasa amin'ny mpampiasa tokana 1 ka hatramin'ny mpampiasa 10.000 raha mitombo ny orinasa. Tena malefaka ihany koa izy, manohana antso avy amin'ny toerana rehetra aorian'ny fidirana ao amin'ny Salesforce, ary azo ampiasaina mora foana nefa tsy mila fitaovana na telefaona fanampiny. amin'ny headphones fotsiny.
Tranonkala ofisialy Natterbox
Izany dia switchboard maoderina sy safidy hafa amin'ny Asterisk. Anisan'ireo mampiavaka azy indrindra ny fahatsoran'ny fampiasana azy, ny fampidirana amin'ireo sehatra lehibe sy ny kalitaon'ny serivisy. Ohatra, mamela ny fampidirana azy amin'ny tsindry tsotra miaraka amina sehatra CRM maro, izay manamora tokoa ny fampiharana azy amin'ny orinasa.
Tena feno ihany koa izy io, miaraka amin'ny fiasa mandroso ho an'ny antsonao sy ny mety hamakafaka ny valiny amin'ny fotoana tena izy, hanaraha-maso ny hetsika.
Tranonkala ofisialy Aircall
Izy io dia serivisy ho an'ny fikambanana tsy mitady tombontsoa sy SME. Miaraka amin'ny Intulse dia hanana vahaolana VoIP mafy orina ianao, ary koa mamela ny fanaingoana hifanaraka amin'ny zavatra ilainao sy ny sehatra iasanao.
Misy koa ny firaketana antso sy tantaram-piantsoana tsy voafetra. Mazava ho azy, mifototra amin'ny rahona izy io ary ahafahan'ny rindranasan'ny feo, fax, lahatsoratra ary rindranasa finday.
Ny safidy asterisk hafa dia JustCall. Rafitra fivarotana sy fanampiana izay miha mahazo vahana tsikelikely. Miorina amin'ny rafitra finday rahona izy io, ary ahafahanao manangona nomeraon-telefaona avy amin'ny firenena 58 hiseho ho nomerika eo an-toerana ho an'ny mpanjifanao.
Tranonkala ofisialy JustCall
Azonao atao ny mitsapa ny rafitra maimaimpoana mandritra ny fotoana iray Zadarma. Vato switchboard virtoaly mifototra amin'ny rahona izay ahafahanao manana vahaolana efa nomanina mba hametrahana ny rafitry ny telefaona birao tsotra.
Tsy mila mividy fitaovana lafo vidy ianao, na tsy maintsy mametraka laharana finday dia mandeha amin'ny Internet avokoa.
Tranonkala ofisialin'i Zadarma
Rafitra telefaona hafa io ho an'ny finday somary maoderina, intuitive ary mifototra amin'ny rahona. Mamela ny orinasa hiasa amin'ny fomba tsotra izy io, ary koa hanara-maso data marobe ao amin'ny tranokalany, amin'izay dia hifehy tsara ny orinasanao. Ankoatr'izay, azo ampifanarahana amin'ny filàna isan-karazany izy io, tsotra, haingana ary manana rafitry ny tapakila.
Tranonkala ofisialin'ny NUACOM
Nieritreritra orinasa, masoivoho ary fikambanana izay miasa miaraka amina mpanjifa marobe sy mpifandray ao anatin'ny orinasa. Efa manana mpanjifa manan-danja amin'ny sehatry ny fiara, angovo, governemanta, sns.
Ity ivon-toerana ity dia cloud based, ary manana vahaolana API hitantanana fampielezana sy fifandraisana mivantana. Ao koa ny famakafakana data, tatitra, fampidirana amin'ny CRM, mailaka tsy misy antso, fandefasana amin'ny feo sy SMS, sns.
Tranonkala ofisialy Ytel
Farany, ny safidy hafa amin'ny Asterisk amin'ity lisitra ity dia ity vahaolana hafa ity izay mifototra amin'ny rahona Virtual PBX. Vahaolana natao ho an'ny tsena isan-karazany, noho izany dia mety hanana karazana orinasa na fikambanana marobe izy.
Izy io dia afaka miasa miaraka amin'ny rafitry ny telefaona orinasa ary ampiharina afaka minitra vitsy monja. Manolotra VoIP, rafitra analog, fanohanana finday avo lenta, WebRTC, SIP Trunking, ary safidy fiantsoana teratany.
Tranonkala ofisialy Virtual PBX
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Asterisk: ny safidy tsara indrindra amin'ity tetikasa loharano misokatra ity
John Doe dia hoy izy:
Ity lahatsoratra ity dia navoaka doka mafy ho an'ny kinova loharano tsy misokatra. Ny tena vahaolana dia vahaolana toy ny freeSwith, vital pbx, sns, sns .. Inona ny fikarohana ratsy ataon'ny mpanoratra ..
Valiny tamin'i John Doe
Ny fanovana voalohany dia nambara tao amin'ny fork CUPS